UMary Archives - Izwi Lamanje
ONE “kwamazwi manje” iNkosi eyawafaka enhliziyweni yami eminyakeni eyishumi nane edlule kwakuwukuthi a "Isiphepho Esikhulu njengesiphepho siza emhlabeni," nokuthi sisondela kakhulu kufayela le- Iso Lesiphepho, kulapho kuzoba khona isiphithiphithi nokudideka. Hhayi-ke, imimoya yalesi Siphepho isiba ngejubane elikhulu manje, imicimbi iqala ukwenzeka kanjalo ngokushesha, ukuthi kulula ukudideka. Kulula ukukhohlwa okubaluleke kakhulu. NoJesu utshela abalandeli baKhe, abakhe ethembekile abalandeli, yini leyo:Qhubeka ukufunda →
THE Isivunguvungu Esikhulu njengesiphepho lokho kusabalale kuso sonke isintu ngeke kuphele ize ifeze isiphetho sayo: ukuhlanzwa komhlaba. Kanjalo, njengasesikhathini sikaNowa, uNkulunkulu uhlinzeka nge- umkhumbi ukuze abantu Bakhe babavikele futhi balondoloze “insali.” Ngothando nokuphuthuma, ngicela abafundi bami ukuthi bangachithi isikhathi futhi baqale ukukhuphuka ngezitebhisi baye esiphephelweni uNkulunkulu asinikeze sona…Qhubeka ukufunda →
NGITHE ukuthi ngizobhala ngokulandelayo ukuthi ungangena kanjani ngokuzethemba eMphongolweni Wokuphephela. Kepha lokhu akukwazi ukubhekiswa kahle ngaphandle kwezinyawo nezinhliziyo zethu ezigxilile iqiniso. Futhi uma sikhuluma iqiniso, eziningi azikho…Qhubeka ukufunda →
UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye II
Ukuvuswa kukaLazaru, ifresco evela esontweni laseSan Giorgio, eMilan, e-Italy
IZINSELELE kukhona ibhuloho iSonto elizodlulela kulo Ukunqoba KukaMama Wethu. Kepha lokho akusho ukuthi indima yamakholwa ayilutho ezikhathini ezizayo - ikakhulukazi ngemuva kwesiXwayiso.Qhubeka ukufunda →
Posted on Mashi 2, 2019 Mashi 2, 2019 by Mark
USt. John uphumule esifubeni sikaKristu, (UJohn 13: 23)
AS ufunda lokhu, ngisendizeni ebheke eZweni Elingcwele ukuze ngiqale uhambo lokuya ezindaweni ezingcwele. Ngizothatha izinsuku eziyishumi nambili ezilandelayo ukuncika esifubeni sikaKristu eSidlweni Sakhe Sokugcina… ukungena eGetsemane ukuze “ngibuke futhi ngithandaze”… futhi ngime ngithule eKhalvari ukuthola amandla eSiphambanweni naseNkosikazini Yethu. Lokhu kuzoba ukubhala kwami ​​kokugcina ngize ngibuye.Qhubeka ukufunda →
UMariya Wendwangu, nguJulian Lasbliez
ZONKE IZINHLOBO ekuseni ngokuphuma kwelanga, ngizwa ubukhona nothando lukaNkulunkulu ngalo mhlaba ompofu. Ngikhumbula amazwi esiLilo:Qhubeka ukufunda →
Lapho Uthulisa Isiphepho
IN ubudala beqhwa langaphambilini, imiphumela yokuphola komhlaba jikelele yayilimaza ezifundeni eziningi. Izinkathi ezincane zokukhula zaholela ezitshalweni ezingaphumelelanga, indlala nendlala, futhi ngenxa yalokho, izifo, ubumpofu, izimpi zombango, uguquko, ngisho nempi. Njengoba uvele wafunda ku Ubusika Bokusishayelwa Kwethu, bobabili ososayensi neNkosi yethu babikezela lokho okubonakala kungukuqala kwenye “inkathi encane yeqhwa.” Uma kunjalo, kungakhanyisa okusha ngokuthi kungani uJesu akhuluma ngalezi zibonakaliso ekupheleni kwenkathi (futhi empeleni kuyisifinyezo IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution futhi okukhulunywa ngakho nguSt. John):Qhubeka ukufunda →
Ukuthula Noma Inkemba?
The Capture of Christ, umdwebi ongaziwa (c. 1520, Musée des Beaux-Arts de Dijon)
KUNYE abafundi bamangazwe yimilayezo esanda kusolwa ye-Our Lady emhlabeni jikelele eya “Thandaza kakhulu… khuluma kancane” qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane noma lokhu:Qhubeka ukufunda →
qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane
Medjugorje… Ongase Ungazi
Ababoni abayisithupha baseMedjugorje ngenkathi besezingane
Umbhali wethelevishini owine imiklomelo nombhali wamaKhatholika, uMark Mallett, ubheka ukuqhubeka kwemicimbi kuze kube namuhla…
NGAPHAMBILI ngemva kokulandela izimanga ze-Medjugorje iminyaka futhi wacwaninga futhi wafunda ngendaba engemuva, into eyodwa esiye yaba sobala: baningi abantu abenqaba umlingiswa ongaphezu kwemvelo wale sayithi yombono ngokusekelwe emazwini ambalwa angabazayo. Isivunguvungu esiphelele sezombangazwe, amanga, ubuntatheli obunobudlabha, ukukhohlisa, kanye nemithombo yezindaba yamaKhatholika iningi eligxeka zonke-izinto-ezingaqondakali kuye kwabhebhethekisa, iminyaka, indaba yokuthi ababoni abayisithupha kanye neqembu lezigilamkhuba zaseFrancisca bakwazile ukukhohlisa umhlaba, kuhlanganise nosanta ongcwele, uJohn Paul II.Qhubeka ukufunda →
1 2 3 4 5 6 ... 8 Okulandelayo »